नाम पछाडिको शब्दका आधारमा कहिलेसम्म विभेद खेप्ने? :: Setopati
नाम पछाडिको शब्दका आधारमा कहिलेसम्म विभेद खेप्ने?
प्रनिता परियार चैत १७
जन्म मेरो धनकुटामा भएपनि बाल्यकाल काठमाडौँमा बित्यो। काठमाडौँमा हुँदाको परिचय बेग्लै थियो, नाम थर नै बेग्लै।
म सम्झन्छु, दशैँमा घर र मामाघर गएको बेला हुने विभेद। विष्टको छोराछोरीलाई 'तँ' भनेर सम्बोधन गर्नु हुँदैन भन्नु हुन्थ्यो हजुरआमा तर उनीहरूले 'तँ' भन्दा पनि फरक पर्दैन थियो।
थाहा थिएन किन हो? होटेलमा खाएपछि चियाको गिलास हजुरआमाले पानीले पखालेर ढोकामा राखिदिनु हुन्थ्यो। थाहा थिएन त्यति बुढी हजुरआमालाई पनि भर्खरको केटोले दमेना भनेर किन बोलाउँथ्यो?
सानैदेखि हेपाई सहन नसक्ने म, त्यो ठूलोबडा भनौदालाई पनि प्रश्न गर्थेँ। 'आफूभन्दा ठूलो मान्छेलाई दमेना भन्ने हो? तिमी भन्ने हो?'
मेरो कुरा हाँसेरै उडाइडिन्थे। हजुरआमा पनि, त्यो ठूलो मान्छे पनि। सायद कलिलो दिमागी सोचले होला, रमाइलो पनि लाग्थ्यो। खेल्न गएको बेला अरु जातका केटाकेटीले खानेकुरा ल्याएका छन् भने जानीजानी छोइदिन्थेँ। उनीहरूले ती सबै खानेकुरा हामीलाई नै दिन्थे।
जब ११ वर्षको भएँ तब बाबाले धनकुटा लिएर आउनु भयो। अनि सुरु भयो मेरो असली भोगाइ। नाम-थर सबै फरक, त्यति मात्र कहाँ हो र, सबैले गर्ने व्यवहार नै फरक।
कोठा भाडामा बसेपनि पानी सार्वजनिक धाराकै पिउथ्यौँ। छिमेकीहरु राई, लिम्बू र मगर जातिका थिए। त्यसो त पानी भर्न ममी नै जानु हुन्थ्यो तर कहिले कहिले गाग्री राख्न जाँदा यदि कोही छिमेकी आन्टीहरु छन् भने 'उता जा, पर जा, या छोइएला' भन्ने शब्दहरूले मन साह्रै दुख्थ्यो।
सोच्थेँ, यदि छोइयो भने हुन्छ चाहिँ के? कति चोटि त भरेको पानी धारामा छ भने कसैले नदेख्ने गरी छोएर भाग्थेँ र विचार गर्थेँ केही हुन्छ कि!
तर कहिले केही भएन। बाबा विदेशमा काम गर्नु हुन्थ्यो। २/३ सालमा छुट्टीमा आउनु हुन्थ्यो। विदेशी रक्सी आउँथ्यो घरमा। त्यही आन्टीहरु रातिको अधेरोमा आएर रक्सी खाएर जान्थे अनि मलाई लाग्थ्यो, रक्सी छोइदैन रैछ।
सानोमा त मन्दिर जान पनि खुब रमाइलो लाग्ने। शनिबार शनिबार भाइलाई लिएर निशान भगवतीको मन्दिर जान्थेँ। केटी मान्छेलाई त भित्र पसेर पूजा गर्न अनुमति थिएन तर केटा मान्छे जान पाउथे।
सानो ठाउँ सबैले सबैलाई चिनेकै हुन्छन्। मेरो भाइलाई भित्र छिर्न दिँदैन थिए। त्यसपछि भाइ मन्दिर जान मन गर्न छोड्यो। विस्तारै ऊ त इसाई धर्मलाई अंगाल्न पुग्यो किनकि ती भगवानको लागि सबै समान थिए। यसरी नै बाल्यकाल बित्यो।
छिमेकीले आफ्नो आँगन बाहेक कहिल्यै सिकवासम्म टेक्ने अनुमति दिएनन्। अनि हामीले पनि त्यसैलाई आफ्नो सिमाना सम्झिएर स्वीकार्यौं।
ब्याचलर्स पहिलो वर्ष पढाइ गर्दै थिएँ। धनकुटा एफएममा २/३ वटा कार्यक्रम चलाउँथेँ। त्योबेला धनकुटा मा ३/४ वटा मात्रै स्कुटर आएको थियो। त्यसमध्ये एक मेरो।
स्कुटी किनेको भोलिपल्टकै कुरा हो, बजारमा मेरो काकाकाकीको सिलाई पसल छ। त्यही पसलछेउ अर्को पनि सिलाई पसल थियो जुन राई थरको दिदीले चलाउथिन्। काकीलाई स्कुटी देखाएर फर्किने क्रममा त्यो अर्को पसलको ग्राहकले ती दिदीलाई 'भरे घर आउँदा मेरो लुगा सकाएर ल्याइदिनु' भन्दै थिइन्।
अनि त्यो दिदीले 'म दमिनी हुँ र घर घर लुगा पुर्यौन!' भनेको सुनेँ। मैले प्रतिप्रश्न गरेँ, 'दमिनीहरूले घरमा पुर्याउन जान्छन् र दिदी? तपाई पनि दमाईंकै काम गरेर खाइराख्नू भाको छु।'
यतिमै उनी भित्रबाट तथानाम गाली गलौच गर्दै बाहिर आइन्। उनले भनेको शब्द, 'तँ आज स्कुटी चढेर हिँडिस् भन्दैमा तँ दमिनी हैनस्?'
म सुन्न नसक्ने भएँ किनभने उनको जस्तो गाली मलाई गर्न आउदैन थियो। मलाई एकदम बेजत महशुस भयो। म त्यहाँबाट एफएम स्टेशन गएँ र सोच्न थालेँ। म जतिको मान्छेलाई त पूरा बजारमा कसैले जातीयता कै आधारमा यस्तो गर्न सक्छ भने अरुको त के गर्लान्!
मैले केही त गर्नै पर्छ। मैले प्रहरी चौकी गएर उजुरी दिएँ। इन्स्पेक्टर आफ्नै मान्छे भएको कारण तिनीहरुलाई समातेर पनि ल्यायो। त्यसमा पनि सबै प्रहरीहरूको आँखा अगाडि ममाथि हातपात समेत भयो। दुई दिनपछि मेरो परीक्षा थियो।
शारीरिक र मानसिक तनावले मैले परीक्षा पनि दिन सकिनँ। माफी माग्न लगाएर, कागज गराएर उनीहरुलाई छोडियो। आफैसँग घिन लागेर आयो किन म यो जातमा जन्मिन पुगेछु।
अब आयो प्रेम सम्बन्धको विषय। मैले पनि माया गरेको थिएँ मथिल्लो जातको सँग र उसले भन्थ्यो 'मलाई जातसँग केही मतलब छैन, म अन्तरतजातीय बिहे नै गर्ने हो। मलाई आफ्नो जातको केटी मन पर्दैन।'
मैले पनि सोचेँ, सायद मायामा जात हेरिदैन होला, मेरो सबैभन्दा ठूलो भुल नै त्यो भयो। ४ वर्ष सम्बन्धमा र एक साल रोएर खेर फालेँ मैले। बिहे त उसले अन्तरजातीय नै गर्यो तर मभन्दा ठूलो जातको सँग।
त्यसपछि मायामा विश्वास नै रहेन। विदेशी भूमिमा छू तर नेपाली साथी बनाउन मन लाग्दैन। घुमिफिरी जात कै कुरा आइहाल्छ। एउटा हातको औँला जति मात्रै साथी छन् र यसमै म खुसी छु।
यो त सारंशमा मैले भोगेका कुरा हुन्। यस्तै अनगिन्ती भेदभावसँग रूमलिँदै छु अझै पनि र भोलिका दिनमा पनि त्यति धेरै परिवर्तन आउ छभन्ने आश्वासन राख्न सक्दिनँ म।
नाम पछाडिको शब्दको आधारमा कहिलेसम्म विभेद खेप्ने? अनि कहिलेसम्म हामी पनि तिमीहरु जस्तै मान्छे हौ, बस् हामीलाई पनि मानिस सरहको व्यवहार गर भनेर लड्ने? आखिर कहिलेसम्म?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १७, २०७७, १३:०९:३१